Hoy i Voniary … – Blaogin'i Voniary
Ity lahateniko nandritra ny lanonam-pamaranana ny fiofanana « Blaogy sy teny malagasy » ity no mahalaza ny fifaliako, ny fientanam-poko sy ny fihetseham-poko rehetra manoloana iny dingana vitan’ny Teny Gasy 2.0 iny. Satriko nantenanana ireo rehetra nanatrika ary indro zaraiko aminao ihany koa.
Lahatenin’i Voniary nandritra ny lanonam-pamaranana ny fiofanana « Blaogy sy teny malagasy »
« Dingana kely iray ho an’ny olona fa vikina goavana ho an’ny olombelona”
hoy Neil Armstrong, mpanamory sambondanitra amerikana, raha nanitsaka voalohany ny volana izy.
Dingana kely iray ho an’ny Teny Gasy 2.0 ity fiofanana “Blaogy sy teny malagasy” ity saingy vikina goavana amin’ny fampiroboroboana ny teny malagasy satria voalohany izao no misy fampifandraisana ny teny malagasy amin’ny tontolon’ny aterineto.
Nahoana moa izahay no nanapa-kevitra hanatanteraka ilay hetsika “Teny Gasy 2.0” voalohany tamin’ny volana Jona 2019? Inona no nandrisika anay hanangana ny vondrona Teny Gasy 2.0 tao aoriana kely? Ary inona no nanosika anay nitotototo tetsy sy teroa nitady fiaraha-misalahy, fanohanana, nanentana fandraisana anjara? Tsy inona fa noho ny fitiavana sy fanomezan-kasina ity tenindrazantsika ity.
Rehefa nandinika manko izahay, nifanakalo hevitra tamin’ireo mpisehatra any amin’ny aterineto mivoy ny teny malagasy dia tsikaritra fa sehatra iray tsy mba ivelaran’ny teny malagasy loatra ny aterineto. Avahako manokana ny Facebook satria mibaribary toy ny tafika andrefan-tanàna ny fahamaroan’ireo vondrona, pejy sy kisarirasy mahatsikaiky amin’ny teny malagasy ao amin’io tambajotra sôsialy io. Fa ny any amin’ny aterineto ankapobeny kosa dia vitsy ihany ny tahirin-kevitra sy fampahalalana amin’ny teny malagasy raha oharina amin’ny teny hafa.
Loabariandasy tamin’ny hetsika Teny Gasy 2.0 andiany voalohany
cc : Fatsora Photography
Ohatra amin’izany fotsiny ity iray zaraiko aminareo ity. Raha niverina ny Best of Malagasy Blogs na BOMBS izay fifaninana isafidianana ireo blaogy malagasy mendrika indrindra ny taona 2019, izany hoe 10 taona taty aorian’ny andiany farany dia izao no nitranga: tao amin’ilay sokajy teny malagasy, 4 ihany ny mpifaninana, ka ny 2 amin’ireo dia blaogy efa nandresy tamin’ireo andiany taloha, ny iray pejy facebook mpizara tononkalo fa tsy blaogy akory ary ny 1 farany no blaogy vaovao.
Fahantrana lalina ho an’ny teny malagasy sy ny kolontsaina malagasy izany satria ny blaogy dia anisan’ireo loharano fampahalalana lehibe indrindra any amin’ny aterineto. Eritereto hoe olon-tsotra, fikambanana, orinasa, sampandraharaham-panjakana maneho ny heviny, ny fomba fiainany sy ny fomba fiasany any anatin’ireny blaogy ireny. Rehefa mitambatra ireny dia zary lasa rakitra mitahiry ny kolontsain’ny firenena iray atolotra havadibadik’ireo mpitsidika amin’izao fotoana izao. Tena mampitombo ny fahalalan’ny mpamaky ny blaogy ary mampisokatra ny mpanoratra azy amin’ny hafa ihany koa. Ny zava-dehibe indrindra dia hijanona ho an’ny taranaka fara aman-dimby ireo raki-kevitra goavana ireo.
Izany rehetra izany no nandrisika ny vondrona Teny Gasy 2.0 hanolotra ity fiofanana “Blaogy sy teny malagasy” ity. Eto aho dia mankasitraka ireo niara-nisalahy taminay nahatontosa ny fiofanana: Ny Manjary, Chocolaterie Robert, Tsiky Photography, Pôetawebs, LHR Iventy, Ahoana no fanoratra ary Blaogin’i Voniary. Ao koa ireo malala-tanana maro sy ny mpiofana izay nitondra ny voarambin’ny tanany. Tsy hadino ny lehibe indrindra dia ny Ministeran’ny Serasera sy ny Kolontsaina izay niara-niasa akaiky taminay tamin’ny alalan’ny IVOKOLO CEMDLAC. Lehibe ianareo, tompoko, ka tsy azo atelina fa ny soa vitanareo kosa dia sitraka sy telina. Sitraka enti-matory ka hovaliana raha mahatsiaro.
Ireo notolorana mari-piofanana cc: Tsiky Photography
Hotolorana mari-piofanana anio ireo andiany voalohany amin’ny fiofanana “Blaogy sy teny malagasy”. Sabotsy 3, adiny 9 izy ireo no nanovo fahalalana ny amin’ny blaogy sy nilona tao anatin’ny fitsipipitenenana ary ny kantombolana malagasy.
Mitodika manokana aminareo hotolorana ny mari-piofanana aho. Tsarovy fa tsy ny taratasy voasonia no inona fa ny fahaizanareo mitrandraka sy mampitombo ary mampiasa izay kely nozarainay teto. Indramiko ny tenin-dRainibozy raha namarana ny fiofanana teto tamin’ny heriny : “enga anie, ho mpanao blaogy mavitrika ianareo ary hahay hiaina ny fanahin’ny teny malagasy”. Satria ny tanjon’ny Teny Gasy 2.0 dia mba tsy ho mpandray fotsiny izay avy any ivelany isika fa hamokatra sy haneho ny maha isika antsika ihany koa any amin’ny aterineto.
blaogysytenymalagasy, ezaka teny gasy, fiofanana, fiofananablaogysytenymalagasy, teny gasy, teny gasy 2.0